MPT Myanmar | Moving Myanmar ForwardCUG FAQ MM - MPT Myanmar | Moving Myanmar Forward
GENERAL » CUG
Closed User Group (CUG) ဆိုတာဘာလဲ?
Closed User Group (CUG) သည် သီးသန့်အဖွဲ့လိုက် သုံးစွဲလိုသူများအတွက် ရည်ရွယ်သည့် ၀န်ဆောင်မှု ဖြစ်ပြီး အဆိုပါ၀န်ဆောင်မှုဖြင့် သုံးစွဲသူများသည် သီးသန့်အဖွဲ့ဖွဲ့ကာ အဖွဲ့ဝင်အချင်းချင်း အခမဲ့စာတိုပေးပို့ မှုနှင့် ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုတို့ကို MPT ၏ ကြီးမားကျယ်ပြန့်ပြီး လုံခြုံစိတ်ချရသည့်ကွန်ရက်ပေါ်မှတစ်ဆင့် လုပ်ဆောင်နိုင်မည် ဖြစ်သည်။
၀န်ဆောင်မှုကို အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ပြီးနောက် အဖွဲ့လိုက်သုံးစွဲနိုင်မည့်အနည်းဆုံးဦးရေမှာ (၅) ဦးဖြစ်ပြီး အများဆုံးသုံးစွဲနိုင်မည့်ဦးရေမှာမူ အကန့်အသတ်မရှိဖြစ်သည်။
ဝန်ဆောင်မှုကို မည်ကဲ့သို့ ရယူနိုင်မည်နည်း
၀န်ဆောင်မှုနှင့်ပတ်သက်သော အသေးစိတ်ကို ပိုမိုသိရှိလိုပါက သုံးစွဲသူများကို တိုက်ရိုက် ဝန်ဆောင်မှုပေးသွားမည့် [email protected] သို့ Call Center: 106 ဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်မည် ဖြစ်သည်။
သုံးစွဲသူများသည် ဝန်ဆောင်မှုအတွက် အခကြေးငွေများကို မည်ကဲ့သို ပေးချေရမည်နည်း။
Prepaid သုံးစွဲသူများသည် CUG ဝန်ဆောင်မှုအခကြေးငွေပေးသွင်းခြင်းကို Main Balance ထဲမှ ဖြတ်တောက်သွားမည်ဖြစ်ပြီး Postpaid သုံးစွဲသူများသည် ဝန်ဆောင်မှုအခကြေးငွေပေးသွင်းခြင်းကို ငွေတောင်းခံလွှာ (Invoice) ဖြင့် ပေးသွားရမည်ဖြစ်သည်။ ကုမ္ပဏီများအတွက် အခြားဝန်ဆောင်မှုများနှင့် အတူ မရောထွေးချင်ပါက ဝန်ဆောင်မှုအတွက် ကြိုတင်ငွေကို လက်ခံဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။
ဝန်ဆောင်မှု စာရင်းသွင်းခြင်း လုပ်ဆောင်ခြင်းသည် တကြိမ်သာလျှင် စာရင်းသွင်းခြင်း (သို့မဟုတ်) လစဉ် စာရင်းသွင်းခြင်းလား။
CUG ဝန်ဆောင်မှုအတွက် စာရင်းသွင်းခြင်းသည် တကြိ်မ်သာ လုပ်ဆောင်ရမည်ဖြစ်ပြီး နောက်လများတွက် အလိုအလျောက် သက်တမ်းတိုးသွားမည်ဖြစ်သည်။
Closed User Group (CUG) ကို ဘယ်သူတွေ အသုံးပြုလို့ရပါသလဲ?
၎င်းဝန်ဆောင်မှုကို MPT ၏ GSM, WCDMA (Prepaid & Postpaid) အသုံးပြုသူများနှင့် CDMA (Prepaid) သုံးစွဲသူများအားလုံးအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
အဆိုပါ၀န်ဆောင်မှုကိုရယူရန် အတွက် မိမိတို့အဖွဲ့တွင်ပါ၀င်သည့် သုံးစွဲသူတစ်ဦးချင်းစီမှ လစဉ်ကြေး (၃,၀၀၀) ကျပ် ပေးသွင်းရုံဖြင့် မိမိ၏ဝန်ထမ်းများ၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့် ပိုမိုလွယ်လင့်တကူ အမြဲထိတွေ့ဆက်ဆံနိုင်မည် ဖြစ်သည်။
CUG ဝန်ဆောင်မှုရယူမထားသော အခြားဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများအတွက် ပုံမှန်နှုန်းထား ကျသင့်မည်ဖြစ်ပြီး သုံးစွဲသူများသည် ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုချင်းနှင့် အထူးပရိုမိုးရှင်းအစီအစဉ်များကိုလည်း ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
CUG ဝန်ဆောင်မှုသည် ပြက္ခဒိန်လ (Calendar Base) အထိ အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
သုံးစွဲသူများသည် CUG ဝန်ဆောင်မှုကို မည်ကဲ့သို့ ပယ်ဖျက်နိုင်သနည်း။
သုံးစွဲသူများသည် ၎င်းတို့ရယူထားသည့် CUG ဝန်ဆောင်မှုများကို ဆက်လက်၍ မယူလိုပါက မိမိတို့ ဝန်ဆောင်မှုရယူထားသည့်ရက်မကုန်မီ ရက်တပတ်ကြိုတင်၍ အရောင်းဌာနသို့ ဆက်သွယ်ရမည်ဖြစ်သည်။